Samsung Galaxy Z Flip3 sy Galaxy Z Fold3 dia nambara: Fantaro ny toetrany, ny vidiny ary ny fandefasana ofisialy | Androidsis
DaniPlay | 11/08/2021 16:57 | Nohavaozina amin'ny 13/08/2021 08:47 | Finday, Samsung
Samsung nanolotra ny hazany roa ao amin'ny Unpacked ny 11 Aogositra. Nanambara ny orinasa koreana ny Samsung Galaxy Z Flip3 vaovao ary ny Samsung Galaxy Z Fold3, finday avo lenta noforonina ho an'ny paosy afaka mamoaka varotra lehibe, satria lafo ny vidiny.
Ny voalohany amin'izy ireo, ny Galaxy Z Flip3 dia mametraka efijery lehibe lehibeAnkoatr'izany dia natao hanoherana ny rano, ankoatry ny antsipiriany hafa. Ny Galaxy Fold3 dia mampiakatra fakan-tsary eo ambanin'ny efijery, raha toa ka tonga tsara fitaovana miaraka amin'ny endri-javatra anatiny izay mahatonga azy ho smartphone amin'ny tsipika.
1 Galaxy Z Fold3, finday avo lenta avo lenta
2 Processeur, RAM ary fitehirizana
3 Ny kalitaon'ny sary dia fisaorana ho an'ireo sensor
4 Batterie, fifandraisana ary maro hafa
5 S penina ho an'ny fifandraisana
6 Samsung Galaxy Z Flip3, terminal lehibe kokoa misy fanoherana ny rano
7 Ny fitaovana anatiny an'ny Galaxy Z Flip3
8 Fakan-tsary telo manontolo
9 SCREEN faharoa
10 Fahafahana sy vidiny
Galaxy Z Fold3, finday avo lenta avo lenta
Ny fandaniana efa ho 1.800 euro dia tsy midika hoe manana telefaona tsara indrindra eny an-tsena. ny Samsung Galaxy Z Fold3 dia mampanantena fa hanana izany rehetra izany eo ambanin'ny efijery roa. Ny haben'ny tontonana dia mahatonga azy io ho takelaka 8-inch, saingy hiasa amin'ny iray foana izany raha tianao.
Ny tontonana lehibe dia ny Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display QXGA + 7,6-inch Miaraka amin'ny fanapahan-kevitra 2208 x 1768 teboka, ny tahan'ny fanavaozana dia 120 Hz. Ilay iray nitazona ho ambaratonga faharoa dia 2-inch Dynamic AMOLED 6,2X miaraka amin'ny vahaolana 2268 x 832 teboka, miloka amin'ny taha mitovy.
Toy ny hoe tsy ampy izany, ny telefaona dia mampiseho famolavolana lehibe mitovy amin'ny andiany Galaxy S20 farany, fa miaraka amin'ny ampahany amin'ilay natomboky ny orinasa, S21. Ny S-Pen dia hanana toerana ambony amin'ny alàlan'ny fanohanany, ilaina tokoa raha ny fananana ny efijery roa sosona sy ny fanatsarana rehefa mikendry.
Processeur, RAM ary fitehirizana
El Samsung Galaxy Z Fold3 dia manapa-kevitra ny hametraka ny iray amin'ireo chips matanjaka indrindra, Qualcomm's Snapdragon 888, izay mitondra anao fifandraisana 5G. Miankina amin'ny chip Adreno 650, natao hanatanterahana amina lohateny misy azy io, noho izany dia mampanantena fandidiana milamina izy raha te hampiasa rindranasa na lalao video avy amin'ny Play Store.
Mametraha RAM 12 GB totaliny, ampy handefasana rindranasa marobe amin'ny fotoana iray, amin'izao fotoana izao dia misy safidy iray ihany ho fenitra. Raha momba ny fitehirizana dia misy safidy roa azo isafidianana, 256 sy 512 GB, manary ny 128 GB satria somary kely ny habaka.
Ny kalitaon'ny sary dia fisaorana ho an'ireo sensor
Ny taranaka fahatelo an'ny Fold dia mitaky dingana lehibe, miaraka amin'ny sensor 12 megapixel Dual Pixel, mety tsara amin'ny fakana sary mazava ireo sary ireo. Ny ambaratonga faharoa dia zoro 12 megapixel ultra wide ary ny fahatelo aoriana dia solomaso telephoto mitovy isa amin'ny megapixels, 12, ao anatin'izany ny Dual OIS ary ny zoom 2x.
Mampifandray fakan-tsary 10 megapixel f / 2.2 anoloana, 80º FOV ary 1,22 µm photodiodes, tonga lafatra amin'ny fakana sary sy horonantsary avo lenta amin'ny vahaolana Full HD +. Ny fakantsary anatiny no fahadimy, 4 megapixels f / 1.8, FOV 80º ary photodiode 2 m, mety misy fampiasana fanampiny raha ilaina izany.
Batterie, fifandraisana ary maro hafa
Ny teboka miavaka amin'ny Samsung Galaxy Z Fold3 dia ny fizakan-tena, ny fitaovana dia tapaka amin'ny alàlan'ny fametrahana bateria 4.400 25 mAh. Ny haingam-pandeha dia tsy voamarina, teboka iray izay tokony hanazavana azy io, indrindra raha fiampangana haingana, raha mihoatra ny 45W dia ampy ny mampiditra azy ao anaty XNUMX minitra feno.
Izy io dia iray amin'ireo terminal feno indrindra raha ny fifandraisana, ny fampidirana 5G / 4G, Wi-Fi haingam-pandeha, Bluetooth 5.2, NFC, GPS ary ny fanidiana dia ny dian-tanan-tanana. Telo ny tray raha ampidirina eSIM sy Nano SIM roa, fanekena tarehy ary fanoherana IPX8.
S penina ho an'ny fifandraisana
Multitasking dia mbola misy ao amin'ny Galaxy Z Fold3, noho izany dia hampiasa ny S Pen izy mpiara-miasa lehibe rehefa manoratra, manao sary ary mampiasa fihetsika. Ankoatra ny S Pen nentim-paharazana dia azonao atao ny mampiasa ny S Pen Pro amin'ny Bluetooth na ny S Pen Fold Edition (tsy misy Bluetooth fanampiny io).
Na ny S Pen Pro na ny S Pen Fold Edition dia samy manana ny fanohanan'ny Air Gestures izay hita amin'ny S Pen an'ny Samsung Galaxy Note 10. Miaraka amin'ny Samsung Galaxy Z Fold3 mandeha lavitra kokoa, sady marina no tsara indrindra rehefa mampiasa azy ireo amin'ny efijery roa heny tokony ho 8 santimetatra.
SCREEN MAIN 2-inch Dynamic AMOLED 7.6X Infinity Flex Display QXGA + miaraka amin'ny 2208 x 1768 pixel vahaolana - Refresh rate: 120 Hz - 374 dpi - Fanohanana S-Pen
SCREEN faharoa Dynamic AMOLED 2X an'ny 6 2 santimetatra miaraka amin'ny famahana ny 2268 x 832 teboka - Refresh rate: 120 Hz - 387 dpi
KARATRA GRAPHIC Adreno 650
FITONDRANA AN-TANY 256 / 512 GB UFS 3.1
CAMERA REAR 12 megapixel f / 1.8 Dual Pixel AF - 12 megapixel zoro somary malalaka - 12 megapixel telephoto telephoto - fakan-tsary 4 megapixel anatiny
CAMERA HATRANY Fakan-tsary eo anoloana 10 megapixel f / 2.2
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 11
OTHER 2 Nano SIM - 1 eSIM - Stereo mpandahateny - Dolby Atmos - Sensorin'ny dian-tanana - Famantaran'ny tarehy -
DIMENSION SY lanjan'ny Gramin'ny 271
Samsung Galaxy Z Flip3, terminal lehibe kokoa misy fanoherana ny rano
Nalefa ho gaga ny orinasa, satria tsy misy ifandraisany amin'ny Flip2, farafaharatsiny tamin'ny fotoana nahitana azy tamin'ny voalohany. Ny Samsung Galaxy Z Flip3 dia mampiditra tontonana lehibe kokoa, saingy tsy izany ihany no hita, satria mampiseho ny fanoherana ny rano ho IPX8.
Ny efijery lehibe dia fampisehoana 2-inch Full HD + Dynamic AMOLED 6.7X Infinity Flex Display miaraka amin'ny famahana 2.640 x 1.080 teboka ary taham-pamelombelona 120 Hz. Ny faharoa dia takelaka Super AMOLED 1,9-inch miaraka amina vahaolana 260 x 512 teboka, miaraka amin'ny 302 dpi.
Ny fitaovana anatiny an'ny Galaxy Z Flip3
Toy ny amin'ny Samsung Galaxy Z Fold3, ny Galaxy Z Flip3 dia mametraka Qualcomm Snapdragon 888, manome azy hery lehibe hanoherana ny asa rehetra. Ny fizarana sary dia hamindra ny zava-drehetra amin'ny mora, ankoatr'izay dia hampiseho hafainganam-pandeha lehibe amin'ny fifandraisana 5G an'ny mpandraharaha samihafa.
Raha miresaka momba ny RAM, ity modely ity dia mametraka modely fahatsiarovana 8 GB, no safidy tokana misy amin'izao fotoana izao ary tsy lavina fa hitombo miaraka amin'ny kinova vaovao io. Ao amin'ny fitehirizana, ny Flip3 dia hanome safidy roa hisafidianana, 128 sy 256 GB miaraka amin'ny hafainganam-pandeha UFS 3.1.
Fakan-tsary telo manontolo
Ny maha samy hafa ny Fold3 sy Flip3 dia betsaka, Ao anatin'izany dia azonao atao ny mahita, ohatra, rehefa mametraka solika haka sary, miaraka amina totaliny telo amin'ny maodely Galaxy Z Flip3. Manana roa aoriana izy, miaraka amina 12-megapixel Dual Pixel AF miaraka amin'ny fanamafisana ny optika ary ny zoro 12-megapixel faharoa.
Eo anoloana dia ahitanao sensor 10 megapixel f / 2.4, photodiode 1,22 µm ary 80º FOV, mety tsara amin'ny fakana sary sy horonan-tsary tsara amin'ny fihodinana fotsiny. Ny teboka ratsy dia ny fanaparitahana na dia ny solomaso any aoriana aza toy ny solomaso telephoto, indrindra ny fahitana ny vidiny lafo aloanao.
SCREEN 2-inch Full HD + Display Dynamic AMOLED 6.7X Infinity Flex (2.640 x 1.080 teboka) 425 dpi sy 120 Hz
1 Super AMOLED 9 santimetatra (260 x 512 teboka) - 302 dpi
CAMERA REAR 12 megapixel Dual Pixel AF - 12 megapixel zoro somary malalaka
CAMERA HATRANY 10 megapixels f / 2.4
BATERA 3.300 Mah
CONNECTIVITY 5G SA / NSA - Sub6 - mmWave - Wi-Fi - Bluetooth - NFC - GPS - Feo stereo -
OTHER Mpamaky ny dian-tanan-tanananananananananananananananananananananananananara Barometera - Gyroscope - IPX8 - Sensomera geomagnetika - Sensor akaiky - Sensorie famirapiratana
DIMENSION SY lanjan'ny Gramin'ny 183
El Samsung Galaxy Z Flip3 dia manomboka mivarotra amin'ny 1.049 euro manomboka amin'ny 27 Aogositra, tsy ampy tapa-bolana mahery amin'ny fividiananao. Ho hita amin'ny crème, green, lavender, phantom black, grey, white and pink. Smartphone iray mampihena ny vidiny.
Samsung Galaxy Z Fold3 dia hanomboka amin'ny vidiny 1.799 euro, sarany izay ho fampiasam-bola lehibe satria fitaovana natao hamoronana fahombiazana lehibe izany. Tonga ny 27 Aogositra izao miaraka amin'ireto loko ireto: Phantom Black, Phantom Green ary Phantom Silver.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung Galaxy Z Flip3 sy Galaxy Z Fold3 dia nambara: Fantaro ny toetrany, ny vidiny ary ny fandefasana amin'ny fomba ofisialy
Top 9 safidy hafa amin'ny VideoScribe